Barcelona Oo Dooneysa Inay Iska Iibiso Ciyaaryahanka Coutinho & Sababo Ku Qasbaa Iibintiisa
HomeSuuqa kala iibsigaBarcelona oo dooneysa inay iska iibiso ciyaaryahanka Coutinho & sababo ku qasbaa iibintiisa
Barcelona ayaa dooneysa in ay iska iibiso ciyaaryahanka khadka dhexe inta lagu jiro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo
Philippe Coutinho wuxuu umuuqdaa inuu ka socdo kooxda FC Barcelona. Kooxda ayaa dooneysa in ay iska iibiso ka dib sannadka cusub, sida laga soo xigtay Sport .
Ka dib markii amaah lagu siiyay Bayern Munich xilli ciyaareedkii hore, Philippe Coutinho wuxuu boos joogta ah ka helay Ronald Koeman oo kow iyo toban ku soo bilaabay bilowgii dayrta.
Si kastaba ha ahaatee, FC Barcelona ayaa haatan dooneysa inay iska iibiso ciyaaryahanka khadka dhexe inta lagu jiro suuqa kala iibsiga ee soo socda, sababo dhaqaale awgood. Dhaqaalaha kooxda Barcelona ayaa ah mid cakiran oo hadii 28 jirkaan reer Brazil uu sii joogo kooxda ugu sii mid ahaado, lacago dheeri ah ayaa ka soo bixi hadii la iibiyo.
Markii uu Coutinho Barcelona uga yimaaday Liverpool jiilaalka 2018, waxaa ku baxday 120 milyan euro, heshiis gunno ah ayaa lagu qoray heshiiska. Sida laga soo xigtay, Liverpool waxay heli doontaa 20 milyan oo kale haddii Coutinho uu u ciyaari lahaa 100 kulan FC Barcelona.
Coutinho wuxuu u ciyaaray Barcelona 90 kulan, taasoo la micno ah inuu dhawaan gaari doono 100 kulan haddii uusan ka tagin kooxda. Si kastaba ha noqotee, qandaraaskiisu ma dhacayo inta laga garaa 2023.